Uchwepheshe we-Semalt Uhlinzeka Umhlahlandlela Ozinyathelo E-10 Ku-Marketing E-Commerce Content
I-SEO nokukhangisa kokuqukethwe kuhlangene. Nokho, uma kuhlelwe futhi isetshenziswe kahle,okuqukethwe kungathuthukisa kakhulu ukusebenza okusesho. Ngakho-ke, ungahlanganisa kanjani izidingo ze-SEO nokudalwa kokuqukethwe?
Yehla kule migomo eyishumi yegolide, enikezwe ngu-Artem Abgarian, iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Ephezulu i-Semalt Imisebenzi ye-Digitial - ð´ð¸ð²ð°ð½ ñð³ð»ð¾ð²ð¾ð¹ ð¼ð¾ð´ñð»ñð½ñð¹.
1. Thola ukuthi amaklayenti anendaba ngani.
Abadayisi abaphumelelayo bayashesha ekutholeni ucwaningo lwemakethe ukuze banqume ukuthi amakhasimende abo 'izidingo. Enye indlela yamahhala futhi esheshayo yokuhlanganisa imibono yokuqukethwe edingekayo ngamakhasimende ukusetshenziswa kwe-SEO ucwaningo lwegama elingukhiye. Ukufeza lokhu, ukhetheukuphendula imibuzo abantu abayifunayo izinjini zokusesha nabasebenzi bokusekela izingxoxo ukuze uthole imibono eyengeziwe.
2. Khetha izinhlobo zokuqukethwe ngokuhlakanipha.
Uma kubhaliwe ngendaba abafuna ukusesha eziningana, ifomu elideokuqukethwe kungaba kuhle. Ukwengeza, okuqukethwe okunjalo kufanele kubhalwe ngolimi oluvame ukusetshenziswa izivakashi. Enye yezindlela ezinhle zokunqumauhlobo olungcono lokuqukethwe ngokulalela izindaba ezibeka kahle ku-Google.
3. Khumbula ukufaka umbhalo ochazayo.
Nakuba izinjini zinezinkinga eziqhubeka njalo, zisadingekaumbhalo ochazayo ukuwasiza ukuba aqonde okuqukethwe, umongo, nezithombe kuvidiyo. Ngaso sonke isikhathi chaza imininingwane ye-infographic bese ufakaimibhalo equkethe amaphuzu ayisihluthulelo oyifisa ukwenza.
4. Ungakhohlwa ukuthi uyithengisa.
Namathela ngemibono yokuqukethwe ehambelana nezinsizakalo nemikhiqizo oyihlinzekayo.Kungase kuzwakale umqondo ocacile. Noma kunjalo, abaseshayo bahlale benesithakazelo kwinombolo engapheli yolwazi, ulwazi, nemikhiqizo. Ngakho-ke,gwema ukukhiqiza okuqukethwe ngaphandle kolwazi oluhlobene nomkhiqizo wakho..
5. Ungabhalisi ukuphathwa.
Bhala izilaleli. Ngaphandle, ababukeli basebenzisa amagama afanayo we-SEO afana nebhizinisi, umgodibhala futhi udale okuqukethwe okuyingqayizivele usebenzisa ulimi oluchazayo nolulula. Noma kunjalo, ngokubhekisela kwamagama angukhiye, ucwaninge ekuqaleni ngenkathi ukhethakokuqukethwe kwakho.
6. Khumbula ukuthengisa, ngobumnene.
abathengi be-E-commerce bafuna abathengi bafike esiteshini sabo noma nini lapho befuna futhiukulingiswa okuqukethwe okukhona. Kodwa-ke, ngezinye izikhathi kungukuqukethwe okungena esikhundleni somkhiqizo nesigaba. Esimweni esinjalo, umdayisikufanele abonise indlela yokunakekelwa noma ukusebenzisa okuthile, futhi lokhu kungakhuthaza izivakashi ukuthenga umkhiqizo.
7. Xhumanisa i-e-commerce nokuqukethwe.
Ukuxhumanisa kuyindlela ebalulekile izethameli zokufinyelela nokugaya okuqukethwe. Futhi,kusiza izinjini ukuqonda ukubaluleka kwezindawo ezihlukahlukene zesayithi. Sebenzisa ukuhamba kwekhanda nokuhamba ngezinyawo ekuxhumaniseni ulwazi futhiokuqukethwe ukuze izivakashi zingathola ulwazi nemikhiqizo kalula.
8. Hamba okuqukethwe kuwebhusayithi yakho.
Uma ufisa ukubeka okuqukethwe kwakho, yibeke endaweni efanayo oyisebenzisayo ekuthengiseni imikhiqizohhayi i-microsite. Ama-Micros awazuzisi ekusebenzeni kokusesha kwemvelo ngoba kungumxhumanisi wangaphandle.
9. Cabanga ngokuqukethwe kokuhlanganisa.
Okuqukethwe kusayithi lakho ngeke njalo kudonse izivakashi ezifanele. Ezimweni ezinjalo,Abathengisi be-e-commerce kufanele babelane ngokuqukethwe. Kwenziwa ngokunikela okuqukethwe kwezinye izingosi ezidlula okuqukethwe kokubamba kuwebhusayithi yakho.
10. Qaphela lapho ushicilela okuqukethwe okuhlanganisiwe.
Ukushicilela izihloko ezisuka komunye umthombo kungase kubonakale kuyinkinga ekhangayo uma wenaayinakho imithombo yokwakha okuqukethwe kwayo. Noma kunjalo, kusukela ekuboneni kwe-SEO, le nkambo yesenzo inokulimaza e-commerce. Iseza umuntuokunye okumele kubheke ngokubamba okuqukethwe kwabo kusayithi lakho.